कोरोनासँग मिल्दो लक्षण छन् ? स्क्रब टाइफस पनि हुनसक्छ ! | Safal Khabar
कोरोनासँग मिल्दो लक्षण छन् ? स्क्रब टाइफस पनि हुनसक्छ !
शुक्रबार, १८ भदौ २०७८, १९ : २०
मन्त्रालयले कोभिड–१९ सँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिने भएकाले परीक्षण गर्दा कोरोना नेगेटिभ आए पनि स्क्रब टाइफसको परीक्षण गर्न अनुरोध गरेको छ । स्क्रव टाइफस ‘ओरिन्सिया सुसुगामासी’ जीवाणुले संक्रमित एक प्रकारको सानो किर्नाको टोकाइबाट मानिसमा सर्छ ।
मन्त्रालयले समयमा नै उपचार नगरे यसले गम्भीर रूप लिने चेतावनी दिएको छ । स्क्रव टाइफसले मस्तिष्क, कलेजो, फोक्सोलगायत अंगमा असर गर्छ । स्क्रब टाइफस रोग मुसाको कानमा वा अन्य जीवजन्तुमा हुने संक्रमित किर्नाले मानिसलाई टोके सर्नेगर्छ ।